ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံဆုကိုင်မြှောက်ခဲ့တဲ့ ပြင်သစ်အသင်းသားကို စာချုပ်လျော်ကြေး ယူရိုသန်း (၁၂၀) နဲ့ခေါ်ယူမယ်လို့သဘောတူခဲ့တဲ့ ဘာစီလိုနာ | FOX Sports Myanmar
ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံဆုကိုင်မြှောက်ခဲ့တဲ့ ပြင်သစ်အသင်းသားကို စာချုပ်လျော်ကြေး ယူရိုသန်း (၁၂၀) နဲ့ခေါ်ယူမယ်လို့သဘောတူခဲ့တဲ့ ဘာစီလိုနာ
လာလီဂါရဲ့ ပုံရိပ်တိုက်စစ်မှူးတွေထဲကတစ်ဦးဖြစ်သလို ပြင်သစ်အသင်းနဲ့လည်း ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံဆုကို ကိုင်မြှောက်နိုင်ခဲ့တဲ့ ဂရဇ်မန်းကို ခေါ်ယူဖို့အတွက် ဘာစီလိုနာအသင်း နောက်ဆုံးသဘောတူညီချက် ရယူခဲ့ပြီလို့ဆိုပါတယ်။
အက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ်အသင်းကနေ ဂရဇ်မန်းအတွက် စာချုပ်လျော်ကြေး ယူရိုသန်း (၁၂၀) ပေးရင်ခေါ်ယူနိုင်မယ်လို့ ဆိုထားခဲ့တာကြောင့် ဘာစီလိုနာအသင်းက နောက်ဆုံးမှာ ဒီပြောင်းရွှေ့ကြေးကို ပေးချေဖို့အတွက် သဘောတူညီခဲ့ပြီး ရာသီသစ်မစခင်အချိန်မှာပဲ ဂရဇ်မန်း ဘာစီလိုနာအသင်းသားဖြစ်လာတော့မယ်လို့ သတင်းတွေမှာ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
🔴¡NO SE HABLA DE OTRA COSA! El Barça,apunto de pagar la cláusula de GRIEZMANN. La última hora, en #JUGONES. pic.twitter.com/95zAgefMoJ
— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 11, 2019
ဂရဇ်မန်းက ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အပြောင်းအရွှေ့တွေမှာလည်း ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ စိတ်ဝင်စားခြင်းခံခဲ့ရသူတစ်ဦးဖြစ်ပမေယ့် သူ့ရဲ့အသင်းဖြစ်တဲ့ အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ်အသင်းမှာပဲ ဆက်လက်ရှိနေဖို့အတွက်ကို ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမယ့် အသင်းနဲ့အတူ တစ်ရာသီဆက်လက်ဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးချိ်န်မှာတော့ နည်းပြဆီမြွှန်နီလက်အောက်မှာ ချန်ပီယံဆု မျှော်လင့်ချက်တွေက နည်းပါးနေတယ်လို့ ယုံကြည်ခဲ့တာကြောင့် ဆုဖလားအာမခံချက်ရှိနေတဲ့အသင်းသစ်တစ်သင်းကို ပြောင်းရွှေ့ကစားဖို့အတွက် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် ရုရှားကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာ ချန်ပီယံပြင်သစ်အသင်းရဲ့ အဓိက ကစားသမားတစ်ဦးအဖြစ် ခြေစွမ်းပြသခဲ့တဲ့ ဂရဇ်မန်းဟာ လာမယ့်ရာသီမစတင်ခင်မှာတော့ ဘာစီလိုနာအသင်းသားအဖြစ် မြင်တွေ့ရတော့မှာဖြစ်လို့ သူ့အတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ အပြောင်းအရွှေ့တစ်ခုလို့ သုံးသပ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။
လာလီဂၝရဲႚ ပုံရိပ်တိုက်စစ်မြးတေထြဲကတစ်ဦူးဖစ်သလိုပင်သစ်အသင်းနဲႛလည်း ကမ္တာႚဖလားခဵန်ပီယံဆုကို ကိုင်ေူမြာက်ိုံင်ခဲ့တဲ့ ဂရဇ်မန်းကို ခေၞယူဖိုႛအတကြ် ဘာစီလိုနာအသင်း နောက်ဆုံးသဘောတူညီခဵက် ရယူခဲ့္ဘပီလိုႛဆိုပၝတယ်။
အက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ်အသင်းကနေ ဂရဇ်မန်းအတကြ် စာခဵပ်ြလေဵာ်ေုကး ယူရိုသန်း (၁၂၀) ပေးရင်ခေၞယိူိုံင်မယ်လိုႛ ဆိုထားခဲ့တာေုကာင့် ဘာစီလိုနာအသင်းက နောက်ဆုံးမြာ ဒီေူပာင်းရြေႚေုကးကို ပေးခေဵဖိုႛအတကြ် သဘောတူညီခဲ့္ဘပီး ရာသီသစ်မစခင်အခဵိန်မြာပဲ ဂရဇ်မန်း ဘာစီလိုနာအသင်းသာူးဖစ်လာတော့မယ်လိုႛ သတင်းတေမြာ ဖော်ူပခဲ့ပၝတယ်။
ဂရဇ်မန်းက္ဘပီးခဲ့တဲိံ့စ်ြအေူပာင်းအရြေႚတေမြာလည်း ဘာစီလိုနာအသင်းရဲႚ စိတ်ဝင်စာူးခင်းခံခဲ့ရသူတစ်ဦူးဖစ်ပမေယ့် သူႛရဲႚအသင်ူးဖစ်တဲ့ အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ်အသင်းမြာပဲ ဆက်လက်ရြိနေဖိုႛအတက်ြကို ဆုံူးဖတ်ခဲ့ပၝတယ်။ဒၝပေမယ့် အသင်းနဲႛအတူ တစ်ရာသီဆက်လက်ူဖတ်သန်းခဲ့္ဘပီးခဵိ်န်မြာတော့ နည်ူးပဆီူမန်ြနီလက်အောက်မြာ ခဵန်ပီယံဆု မ္တွော်လင့်ခဵက်တေကြ နည်းပၝးနေတယ်လိုႛ ယုံကည်ခဲ့တာေုကာင့် ဆုဖလားအာမခံခဵက်ရြိနေတဲ့အသင်းသစ်တစ်သင်းကိုေူပာင်းရြေႚကစားဖိုႛအတကြ် ဆုံူးဖတ်ခဲ့ပၝတယ်။
္ဘပီးခဲ့တဲိံ့စြ် ရုရြားကမ္တာႚဖလား္ဘပိင်ြပြဲမြာ ခဵန်ပီယူံပင်သစ်အသင်းရဲႚ အဓိက ကစားသမားတစ်ဦးအူဖစ်ေူခစမြ်ူးပသခဲ့တဲ့ ဂရဇ်မန်းဟာ လာမယ့်ရာသီမစတင်ခင်မြာတော့ ဘာစီလိုနာအသင်းသားအူဖစ်ူမင်တြေႚရတော့မြာူဖစ်လိုႛ သူႛအတကြ် ကောင်းမန်ြတဲ့ အေူပာင်းအရြေႚတစ်ခုလိုႛ သုံးသပ်မတြေရြိနေပၝတယ်။
Home Football La Liga ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံဆုကိုင်မြှောက်ခဲ့တဲ့ ပြင်သစ်အသင်းသားကို စာချုပ်လျော်ကြေး ယူရိုသန်း (၁၂၀) နဲ့ခေါ်ယူမယ်လို့သဘောတူခဲ့တဲ့ ဘာစီလိုနာ